musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Kuenda ku Vegas? Rongedza Masiki ako
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kuenda kuVasgas? Mask up!
Mazhinji ematunhu ematunhu eNevada adzoka pasi pemasimasi mvumo yekuyedza kudzivirira kubva kumakesi matsva eCOVID-19 mhiri kweUnited States. Pamatunhu gumi nematanhatu ehurumende, gumi nemaviri adzoka pakuda kupfekwa mamask.
Kuenda kuSin City? Iwe unozoda kupfeka mask.
Kuronga pamusoro pekugara mukasino kwemaawa pane muchina weSlot kana petafura tafura? Iwe uchazoda mask nguva yese iwe uripo.
Unoda kutora mumabuffets asingaperi? Chokwadi, enda kumberi, asi iwe uchazoda kupfeka mask pakati pekudya chaiko.
Vashanyi vane vakasangana manzwiro nezve iyo mamask mvumo yekudzoka musimba. Zvimwe hazvinetsi zvachose. Muchokwadi, vazhinji vakasarudza vega kuchengetedza masiki avo chero zvakadaro kunze kwekudzivirira. Asi kune vamwe, havasi kufara kwazvo kutevedzera. Kunyanya vanosvuta. Kuva nekukwevera masiki pasi, tora kudhonza, kufema uye kuburitsa mweya, kuisa masiki kumusoro ndiko kwavari kupfuura kutsamwisa.
Munyika yose, zvinoita sekuti vazhinji vakuru muhurumende vakaneta, zvakare, uye vari kusarudza kurega vagari kuti vasarudze. Pfeka chifukidzo, usapfeka mask, zviri kwavari. Tora Hawaii semuenzaniso. Kunyangwe kana nhamba dzenhamba dzavo nyowani dzichikwira kupfuura zvavaive vadzokera mu "COVID-19 heyday" yehuwandu, Gavhuna akati haasi kuita danho rekuraira chifukidzo chekupfeka. Nhasi, maitiro ake akavakirwa chete pakutarisa iyo data yekubaiwa uye kuzadzisa boka rekudzivirira. Zviripachena kuti chii chinoitika pakati pezvino neapo - kana "ipapo" akambouya - hazvina basa. Vashandi vezvechiremba vanogona kunge vaine pfupa rekutora naye sezvo zvipatara zvavo zviri kuzadza nevazhinji uye vakawanda COVID-19 varwere mazuva ese.